ဒီနေ့တော့ Microsoft ကထုတ်တဲ့ MS-DOS စာအုပ်လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တော်တော်များများကတော့ စိတ်ဝင်စားကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခုချိန်ထိအောင် ဘယ်လိုမှချန်ထားလို့မရတဲ့ DOS Command လေးတွေရှိနေတာရယ်၊ ပစ်ပယ်လို့မရသေးတာရယ်၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူငယ်ချင်းများ အတွက်ရည်ရွယ်ပီး တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒီစာအုပ်ရဖို့အတွက်ကို တော်တော်လေး Scan ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဒီတော့မှလည် ကိုယ်နဲ့ ယှဉ်တဲ့ ကိုယ်ချင်စား တရားလေးကို သတိထားလိုက်မိတယ်။ ဒါကြောင့် စာအုပ်တွေတင်ပေးတဲ့ နောင်တော် ၊ ညီတော် ရောင်ရင်းတို့တွေကိုလည်း တော်တော်လေး ကိုယ်ချင်းစာမိသွားပါတယ်။ တော်တော်လေး ပြည့်စုံစွာရေးသားထားလို့ အားလုံးအတွက်ဝေမျှ လိုက်ပါတယ်။MS_DOS...
Windows တင်နည်းကို သေချာ နားလည်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်
7:59 AM firststep5comments
အင်တာနက် တစ်လကျော် နှစ်လလောက် ပျက်တောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေ ၊ လာလည်နေကျ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်း ။ ကူးညီခြင်းများ မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။ အခုတော့ အင်တာနက်လဲ ပြန်ရပြီ၊ မေးထားတာတွေလဲ ဖြေပေးမည်။ အသစ်အသစ်တွေလည် ရေးပေးမည်။ ကျွန်တော်ကိုလည် ပြန်လည် သင်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ အခု ဆရာတော် တစ်ပါးက Windows တင်နည်းနဲ့ ပက်သက်လို့ အသေးစိတ် ရေးပေးဖို့ တောင်းဆိုထားလို့ အသေးစိတ်နိုင်သမျှ စိတ်အောင် ရေးပေး ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ Windows XP နှင့် Windows7အတွက် ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ VIsta နဲ့ Windows7က လုပ်ဆောင်ချက်ခြင်းသိပ်မကွာလို့ Windows Vista အတွက်တော့ မေ၇းပေးတော့ပါဘူး။ USB နဲ့ တင်နည်းကိုတော့ သီးခြား ထပ်ရေးပေးပါအုံးမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။Downl...
A+ Seventh Edition စာအုပ်ကောင်းလေးပါ
9:46 AM firststep No comments
ကျွန်တော်ကို ညီလေးတွေ သူငယ်ချင်းတွေက ပြောကျတယ် ကွန်ပျူတာကို ဘယ်က စလေ့လာရမလဲလို့ ။ ကျွန်တော်လဲ ပြောပါတယ် hardware ရဲ့ အကြောင်းတွေ Windows ရဲ့ Tool တွေကို လေ့လာဖို့ အမြဲတိုက်တွန်းပါတယ်။ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ စက်ကို တကယ်လက်တွေ့နားလည်းဖို့က အဓိက ကျပါတယ်။ ကျန်တဲ့ Programming တွေ အရင် မလေ့လာခင် မိမိ အသုံးပြုနေတဲ့ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးကို ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ် အသုံးပြုတက်ဖို့ အရင်လေ့လာ မှတ်သာဖို့လည် အဓိကျပါတယ်။ ဒါမျိုးဆိုတာကလဲ ကိုယ်ကိုယ်ကလဲ လေ့လာ မှတ်သာ သင်ယူမှ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာဖတ်ပါ။ လေ့လာပါ သင်ယူပါလို့ဘဲ ပြောရပါမည်။ hardware နဲ့ ပတ်သက်ပြီ အရင်ကတော့ ရေးပေးမလို့ပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ဆရာဇော်လင်းရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေ ၊ အွန်းလိုင်က နည်းပညာ ဖြန့်ဝေတဲ့ ဆိုဒ်တွေ တော်တော် များများ တင်ပြထားတာတွေ အရမ်းကောင်းတာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေ ဖတ်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ နောက် နည်းနည်း နားလည်...
4:51 AM firststep No comments
ကျွန်တော်တို့ Networking အကြောင်းကို လေ့လာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ ကျွန်တော်လည် ဖတ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းများလည် ဖတ်လို့ရအောင် တင်ပြပေးလိုက်တာပါ။ မြန်မာလို မဟုတ်ပေးမဲ့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုဆိုပြီ လက်ရှောင်မှာ ဆိုလို့ အရင်ပြောတာပါ။ အောက်မှာ Download ချလိုက်ပါ။MediafireMegaupl...
Windows7ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတက်စေရန်
6:47 PM firststep No comments
ကျွန်တော် Windows7အကြောင်းကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတက်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီ Post တွေ စတင်ရေးနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော် စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ Download ချပြီ ဖတ်ကြည့်လိုက်တာ အင်္ဂလိပ်လို တစ်လုံးမှ နားမလည်တဲ့ သူငယ်ချင်း များတောင် ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတက်နိုင်စေတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ပုံလေးတွေနဲ့ စနစ်တကျ တင်ပြထားရုံးမျှမက မျှားလေးတွေကို အရောင်အသွေးနဲ့ပါ ဖန်းတီးပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် မျက်စီလည်တယ်လို့ ပြောပြောနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်က စာအုပ်ကို Download ချပြီ လေ့လာစေချင်ပါတယ်။ တစ်နာရီလောက် အချိန်ပေးလိုက်ရင်တောင် အတော် နားလည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းများကို မျှဝေးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။MediafireMegaShareMegauploadMultiupl...
Hacking Exposed ( Computer Forensics )
9:03 AM firststep 1 comment
Hacking အကြောင်းကို တစိုက်မတ်မတ် လေ့လာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများရှိရင် ဖတ်လို့ရအောင်လို့ ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဖတ်လည်း မဖတ်ဖြစ်ပါဘူး ။ အဲဒါကြောင့် စာဖတ်ပိရိသတ်များအတွက် သီးသန့်လေး တင်လေးလိုက်ပါတယ်။ ပြန်ရှင်းဖို့ကလည်း ကျွန်တော်က မဖတ်ရသေးတော့ မရှင်းပြတော့ပါဘူး။အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါအုံး။DownloadMegauploadMediaf...
A+Book 6th Edition စာအုပ်
10:12 AM firststep No comments
A+Book 6th Edition English စာအုပ်ကို ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းများ ဖတ်လို့ရအောင် တင်ပြပေးလိုက်တာပါ။ MegauploadA+Book 6th Edition Part -1 A+Book 6th Edition Part -2 MediaFire A+Book 6th Edition Part -1 A+Book 6th Edition Part -2...
Hardware Hacking စာအုပ်
3:19 PM firststep4comments
ကျွန်တော် စာအုပ်တွေတော့ တင်ပြပေးဖို့ ရှာဖွေးစုဆောင်ထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေးမဲ့ ကျွန်တော် မအားတာက တစ်ကြောင်း အင်တာနက်က အလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တာက တစ်ကြောင်း စတဲ့စတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ကျွန်တော် စာအုပ်တွေ မတင်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ပက်မှာ သူငယ်ချင်းများအတွက် စာအုပ်တွေကို တက်နိုင်သမျှ တင်ပြပေးပါမည်။ အခုတင်ပြမှာကတော့ ကွန်ပျူတာပျင်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် အသုံးဝင်မဲ့ Hardware hacking စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းမကောင်းတော့ ကျွန်တော်လဲ မသိပါဘူး ။ ကျွန်တော်လဲ မဖတ်ရသေးလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သေချာတော့ မပြောနိုင်ပါ။ဘာဘဲပြောပြော စာဖတ်သူအတွက် အကျိူးမယုတ်ပါဘူး။ ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ Download ချလိုက်ပါ။ဒီမှာ Drown ...
4:46 AM firststep3comments
Hacking အကြောင်းကိုမှ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ဖတ်လို့ ရအောင်တင်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတ...
4:28 AM firststep 1 comment
ဒီရက်ပိုင်းမအားတာလို့ ကွန်ပျူတာအကြောင်းကို မရေးဖြစ်ပါဘူး။ စာအုပ်တော့ ကျွန်တော်လဲ လိုအပ်လို့ ရှာရင် ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းများပါ ဖတ်လို့ရအောင် တင်လိုက်တာပါ။ ပုံမှန်တင်ပေးနိုင်ကို ကြိုစားနေပါတယ်။အခု Network ကိုလေ့လာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများ လေ့လာလို့ ရအောင် TCP/IP အကြောင်းစာအုပ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ MediaFire...
Window Server Hacks စာအုပ်
12:24 AM firststep No comments
Window Sever Hacks စာအုပ်ကို သူငယ်ချင်းများလေ့လာလို့ ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။MegaShare MediaFire...
Window XP Networking စာအုပ်
12:02 AM firststep No comments
Window XP Networking စာအုပ်ကို သူငယ်ချင်းများလေ့လာလို့ ရအောင် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။MediaFire MegaSh...
Window XP Registry စာအုပ်
11:53 PM firststep No comments
Window XP REGISTRY ကို လေ့လာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများ လေ့လာလို့ ရအောင် Window XP registry စာအုပ်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အောက်မှာ Download ချလိုက်ပါ။ MediafireMegaShare...
PHP Programming Solutionစာအုပ်
4:03 AM firststep3comments
PHP ကို လေ့လာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် မျှဝေးလိုက်တာ...
3:19 AM firststep2comments
DataBases Beginner's Guide စာအုပ်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ DataBases ကို လေ့လာနေ့တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် လေ့လာလို့ ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာ...
Gmail နှုင့်Gtalk အသုံးပြုနည်းစာအုပ်
4:21 AM firststep3comments
ကျွန်တော် ဒီစာအုပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့တာ ၃ လပိုင်းက ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်းကတော့ ကျွန်တော် ၀င်ကြည့်တဲ့ ဆိုဒ်တွေမှာ Upload တင်ခဲ့ပါတယ်။ အတော်များများကိုလည့် ဖြန့်ခဲ့ပြီပါပြီ။ ကျွန်တော်ဆိုဒ်မှာ E-Books မှာ ကျွန်တော် upload တင်ထားပါတယ်။ အားလုံးကိုဖတ်စေချင်လို့ နောက်တစ်ကြိမ် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ Download ချချင်တယ်ဆိုရင်တော့ E-Books မှာ တင်ပေးထားပါတယ်။Very Easy Useful1 ...
Essential networking စာအုပ်
10:37 AM firststep No comments
ဦးဇော်လွင် Essential networking အကြောင်းစာအုပ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါ...
10:17 AM firststep No comments
Wireless စာအုပ်ကို သူငယ်ချင်းများကိုတင်ပြပေးလိုက်တာ...
Network Security စာအုပ်
10:15 AM firststep No comments
အင်တာနက်သုံးလာရင် Network ရဲ့ လုံခြုံမှုကို က အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် Network Security အကြောင်းရေးထားတဲ့ စာအုပ်ကို တင်ပေးလိုက်တာပါ။...
Content Networking စာအုပ်
10:11 AM firststep 1 comment
Content Networking စာအုပ်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Network အကြောင်းလေ့လာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတ...